Tuesday April 02, 2019 - 20:13:31 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya doorashooyinkii degmooyinka ee ka dhacay wadanka Turkiga iyadoona kooxaha mucaaradka ay guulo muuqdo kasoo hooyeen.
Guddiyada doorashooyinka xukuumada Turkiga ayaa sheegay in 52% ay guushu ku raacday xisbiga talada haya ee cadaaladda iyo hormarka isku magacaabay halka kooxaha mucaaradka ay heleen 38% codadkii ladhiibtay.
Balse xisbiga Erdogaan ayaa guuldarro weyn kala kulmay doorashooyinkii ka dhacay magaalooyinka waaweyn oo maalmulkooda ay lawareegeen kooxaha mucaaradka ah.
Magaalada Anqara ee caasimadda Turkiga doorashadii ka dhacday waxaa ku guuleystay musharaxa xisbiga mucaaradka ee lagu magacaabo xisbiga shacabka jamhuuriga, Mansuur Baawaash ayaa sheegay in uu ka guuleystay Muxamed owzkaski oo metelayay xisbiga Erdogaan.
sidoo kale maamulka magaalada istanbuul waxaa ku guuleystay kooxaha mucaaradka ah waxaana meesha ka baxay musharraxii metelayay xisbiga talada haya.
Guuldarrada Erdogaan kuma eka Istanbuul iyo Anqara oo kaliya ee sidoo kale waxaa looga adkaaday doorashadii ka dhacday magaalada Izmiir oo ay kusoo baxeen kooxaha mucaaradka ah.
Bin cali Yaldriim oo ahaa R/wasaarihii hore ee Turkiga oo hadlayay ayaa sheegay in inkastoo ay si guud iyagu ugu guuleysteen doorashooyinkii dowladaha hoose ee dhacay hadane ay dareemayaan khasaara ku aaddan maamulidda magaalooyinka waaweyn taas oo caqabad weyn ku noqon doonto doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa madaxtinimada.
Taageerayaasha xisbiga jamhuuriga calmaaniga ah ayaa dhigay dibd baxyo ay ugu dabaal degayaan guulaha ay soo hooyeen waxayna sheegeen in 25 sanadood kadib ay dib ugusoo laabanayaan awoodda siyaasadda wadanka turkiga waxayna ka codsadeen madaxda xisbiga in ay sare usii qaadaan hanaanka sare uqaadidda dhaqaalaha si ay shacabka turkiga ukasbadaan.
Maamulka dabadhilifka ah ee Erdogaan madaxda ka yahay ayaa sanado badan oo uu talada hayay kadib wuxuu hadda wajahayaan turaanturooyin dhanka siyaasadda ah.